Nkọwapụta ihe nkedo nke Mahadum Minnesota kpughere | Site na Linux
Nkọwa banyere ihe nkedo nke Mahadum Minnesota gosipụtara
N'oge ikpeazụ ụbọchị ole na ole ahụ ikpe banyere omume nke otu ndị nyocha mere site na Mahadum Minnesota, ebe ọ bụ site na echiche nke ọtụtụ, omume ndị dị otú a gbasara mmeghe nke ọma na Linux Kernel enweghị ihe ziri ezi.
Na agbanyeghi otu Mahadum nke Minnesota nke nyochaiji bipụta akwụkwọ ozi mgbaghara, onye nnabata mgbanwe na kernel Linux nke egbochiri Greg Kroah-Hartman, kpughere nkọwa nke patches nyefere ndị na-emepe kernel na akwụkwọ ozi ya na ndị na-elekọta ya metụtara patches ndị a.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nsogbu niile nsogbu juru Na nkwado nke ndị na-elekọta ahụ, ọ nweghị patch ndị a kwadoro. Eziokwu a na-eme ka o doo anya ihe mere Greg Kroah-Hartman ji mee ihe ike, dịka o doro anya ihe ndị nyocha ahụ gaara eme ma ọ bụrụ na onye nlekọta ahụ akwadoro patch ahụ.
Na nlọghachi, rụrụ ụka na ha bu n'obi ikpesa ahụhụ ahụ ha agaghị ekwe ka patch gaa Git, mana o doro anya ihe ha ga-eme ma ọ bụ ebe ha ga-aga.
Na ngụkọta, na August 2020, e zigara patch ise site na adreesị na-enweghị aha acostag.ubuntu@gmail.com na jameslouisebond@gmail.com (leta si James Bond): abụọ ziri ezi na atọ gụnyere njehie zoro ezo, na-eke ọnọdụ maka ọdịdị nke nsogbu.
Onye ọ bụla kwachie nwere naanị 1 ruo 4 ahịrị nke koodu. Isi echiche dị n'azụ ihe ọjọọ ndị ahụ bụ na idozi ihe ncheta nwere ike ịmepụta ọnọdụ maka enweghị ike abụọ.
Ebumnuche a bụ imezi nchebe nke usoro patching na OSS. Dịka akụkụ nke ọrụ ahụ, anyị na-amụ ihe nwere ike ịbụ nsogbu usoro OSS, gụnyere ihe kpatara nsogbu na aro maka ịza ha.
N'ezie, ọmụmụ ihe a na-ekpughe ụfọdụ nsogbu, mana ebumnuche ya bụ ịkpọ maka mbọ iji meziwanye ya
patching usoro na-akpali ndị ọzọ ọrụ ịzụlite usoro iji nwalee ma nyochaa patches, na n'ikpeazụ iji mee ka ndị OS ọzọ ala.
Dabere na patch ndị a, anyị na-achikota usoro ha, mụọ ihe kpatara kpatara mmeghe mwebata ahụhụ ji esi ike ijide (yana nyocha na ikike na ọnụọgụ), yana nke kachasị mkpa na-enye aro iji dozie nsogbu ahụ.
Ihe mgbochi nsogbu nke mbu mere ka ebe nchekwa ahụ dị site na itinye oku na kfree () tupu ịlaghachi akara na ikpe nke njehie, ma na-eke ọnọdụ iji nweta ebe nchekwa ebe mgbe ọ napụtara (jiri-mgbe-free).
Ndị nlekọta ahụ ajụghị ihe ndozi ahụ, onye choputara nsogbu ahu ma gosiputa na otu afo gara aga mmadu gbaliri igbuputa mgbanwe yiri ya ma na mbu anabatara ya, ma tufuo ya otu ubochi mgbe achoputara onodu ojoo.
Ihe mgbochi nke abụọ nwekwara ọnọdụ maka mbipụta post-ntọhapụ. Ekwenyeghị onye nlekọta ahụ, onye jụrụ patch ahụ n'ihi nsogbu ọzọ na list_add_tail, mana amataghị na pointer "chdev" nwere ike ịtọhapụ na ọrụ put_device, nke a na-eji na-esote oku na dev_err (& chdev -> dev ..). Agbanyeghị, anabataghị patch ahụ, agbanyeghị maka ebumnuche ndị na-enweghị njikọ gbasara ngwangwa.
Na-atụgharị uche, na mbu echere na 4 n'ime uzo ise nwere nsogbu, ma ndị na-eme nchọpụta n'onwe ha mehiere ma na nsogbu nsogbu, n'echiche ha, e gosipụtara ụzọ dị mma, na-enweghị ọnọdụ ekwesiri iji ebe nchekwa mgbe mmalite.
Na ọrụ a, anyị na-ewetara echiche nke «ọmụmụ akabeghị aka vulnerability» ebe a ọnọdụ nke vulnerability na-kọrọ, ma ọ pụrụ ịghọ ezigbo onye mgbe ọnọdụ bụ n'ụzọ zuru ezu
ewebata site na kwachie maka ahụhụ ọzọ.
Anyị na-ewepụtakwa ngwa ọrụ ga-enyere anyị aka ịchọta ebe koodu koodu nwere ike ịta ahụhụ
nke ahụhụ mmeghe patches na-atụ aro ihe nwere ike ime ka ndị a ahụhụ iwebata patches siri ike ịchọpụta.
Otu izu ka e mesịrị, e zigara ndị mmepe kernel ozi na nkwupụta iji tụlee ohere nke ịkwalite adịghị ike dị ka ihe ndozi na-enweghị isi maka nkwụsị ebe nchekwa, mana ọ nweghị ihe ekwuru gbasara mbọ ndị gara aga iji nyefee ihe ọjọọ.
Ihe njide nke atọ ajụrụkwa onye nlele ahụ n'ihi ahụhụ ọzọ na-enweghị nsogbu (ngwa abụọ na pdev).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nkọwa banyere ihe nkedo nke Mahadum Minnesota gosipụtara
VLC 3.0.13 na-edozi ụfọdụ adịghị ike